Dzidziso: Maitiro ekuisa zvirongwa paLinux uye chero mapakeji? | Linux Vakapindwa muropa
Isa zvirongwa paLinux
Imwe yenyaya dzinoramba dzichikonzera matambudziko kune vatsva kuLinux kana vashandisi vane ruzivo rudiki ndiko kuiswa kwemapakeji kana maitiro ekuisa zvirongwa muLinux. Izvi zvakagadziriswa pamwe nematurusi akaita seYaST, Software Center, Pi Chitoro, uye zvimwe zvirongwa zvekumisikidza kuiswa kweLinux seGdebi, Synaptic, nezvimwe.
Asi patinotora software mapakeji izvo zvisiri mumadura ekugovera kwedu kana isu tinoda kuisa zvirongwa muLinux neimwe vhezheni yakasiana neiyo yakapihwa neiko kunobva nzvimbo yedu yedistro, zvinhu zvinowedzera kuoma. Kunyanya kana mapakeji akarodha pasi ari tarballs nekodhi kodhi.
MuWindows, ine Windows Installer zvese zviri nyore, zvakare hapana kuwedzerwazve kwakawanda mabhainari ekuisa (.exe, .bat, .msu). Avo vanobva kupuratifomu yeApple vachazoonawo kuti iyo Mac OS X .dmg ine yakawedzera kuwanda.
Imwe nyaya isingafadzi muLinux (uye imwe * nix) iri kutsamira, ndokuti, mapakeji anoenderana nemamwe mapakeji uye kana ekupedzisira asina kuiswa isu hatizokwanise kuisa yekutanga. Mune ino kesi, kune vazhinji vemapakeji mamaneja ayo anoita kuti hupenyu huve nyore uye otomatiki kugadzirisa kutsamira. Zvikasadaro isu taifanira kuzvigadzirisa pachedu nemaoko.
Nzira yekuziva yangu IP muLinux
Neichi Tutorial Ini ndinofunga kuti zvese izvi chimwe chinhu chisingakoshi kwauri uye hazviunze dambudziko kana uchiisa zvirongwa muLinux. Mune inotevera mitsara isu tichaenda kurondedzera ese akakurumbira ekuwedzera uye mhando dzemapakeji aripo muLinux nyika uye maitiro ekuzviisa nenzira yakapusa.
1 .Deb uye .rpm mapakeji:
2 Mamwe mamaneja emapakeji pane yako distro:
3 Maitiro ekuisa tarballs:
3.1 Isa tar.gz kana tgz:
3.2 Tar.bz2 kana .tbz2:
3.3 Imwe Tepi Archive:
3.4 Tar.xz kana .xz kana .txz:
3.5 .gz kana .gzip kana .bzip2:
4 Maitiro ekuisa mabhinari mapakeji:
5 Maitiro ekuisa zvinyorwa:
.Deb uye .rpm mapakeji:
Linux yakakamurwa kuita maviri epasirese epasi uye inomiririrwa chaizvo nemapakeji DEB uye RPM. Yekutanga inoshandiswa neDebian uye zvigadzirwa zvakaita seUbuntu, nepo yechipiri ichishandiswa neSUSE, Fedora, nevamwe.
Kana iwe uri Novell SuSE kana mu openSuSE, unogona kushandisa YaST kuisa mapakeji erudzi urwu. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuenda kumenyu yeSUSE, tinya pa "Sisitimu", "YaST" wobva waenda pane sarudzo "Isa / bvisa software". Saka isu tinogona kuisa zvirongwa muLinux kubva kuDVD yeako distro kana kubva kunetiweki.
Kana isu tatova nechave kurodha pasi pasuru, tinogona kurudyi-pinda pairi uye ichatipa isu sarudzo yekuisa. Zviri nyore kwazvo…
Unzip RAR paLinux
Kana isu tichida kuzviita kubva kunyaradzo pane YaST inoshandisa Zypper:
MuRed Hat zvimwe zvakafanana ... Kune rimwe divi, kana iwe uine Fedora kana CentOS, unogona kushandisa YUM. Ngatitangei tatanga neYUM, iyo kubva kudhairekitori iriko pasuru, mune terminal yaunofanira kunyora:
Uye kana paine chishandiso chakajairika kuisa RPM Ndiyo rpm pachayo iriko mukuparadzira kwakawanda kunoenderana nerudzi urwu rwepakeji:
MuMandriva unogona kushandisa Mandriva Control Center kuisa zvirongwa kana RPMDrake. Iwe unogona zvakare kushandisa mune zvinyorwa mode
MuUbuntu, unogona kushandisa iri nyore Ubuntu Software Center kuisa mapakeji kubva kumahofisi epamutemo. Kubva kuDebian inogona zvakare kuiswa ne gdebi-gtk, graphically uye nyore kana neiyo Synaptic, izvi zvinoshandawo pane mamwe ma distros, iwe unofanira kungo zviisa.
Chimwe chishandiso chinonakidza Dselect, zvakare mune graphic mode yekubata mapakeji nyore. Asi kune avo vanodhonza iyo koni zvakanyanya, unogona kushandisa dpkg kana apt (rangarira kunamatira sudo kana kushanda uine midzi irombo):
Kukodzera chimwe chishandiso chakazara chaunogona kushandisa nekutaipa zvinotevera:
Mamwe mamaneja emapakeji pane yako distro:
Arch Linux uye zvigadzirwa zvinoshandisa maneja wepakeji anonzi Pacman. Yakagadzirwa naJudd Vinet uye inokwanisa kugadzirisa otomatiki kutsamira. Kuisa package pamwe nemaneja uyu:
Portage ndomumwe wemaneja makuru emapakeji semuenzaniso Gentoo. Iyo yakafanana neiyo BSD Ports uye inoenderana nePOSIX uye iyo python nharaunda. Iyo zvakare inoshandiswa neFreeBSD. Kuisa pasuru nayo:
paldo Iyo Linux kernel inoshanda sisitimu iyo inoshandisa upkg package maneja. Yakagadzirwa naJürg Billeter uye kuisa zvirongwa muLinux naye unofanira kunyora:
Iyo Pardus Linux distro inoshandisa yakapusa package maneja yakanyorwa muPython uye inozivikanwa se PiSi. Iyo inoshandisa LZMA uye XZ kumanikidza mapaketi uye, pamusoro pezvose, iyo Delta tekinoroji iri kurova, iyo inobvumidza kurodha chete chete misiyano pakati pemapaketi kuchengetedza bandwidth. Isa seizvi:
Maitiro ekuisa tarballs:
Mapakeji akaiswa zvakananga kubva kunobva akaiswa neyechinyakare, asi ichiri kubatsira uye inoshanda, Tar chishandiso (ndosaka zita tarball) uye wozomanikidzwa uchishandisa imwe mhando yekumanikidza fomati.
Mimwe mapakeji erudzi urwu anouya nemafaira mukati senge .jar, .bin, .rpm, ..., mune izvo kesi iwe unofanirwa kungoburitsa uye nekushandisa nzira kwayo yeiyo bhanari irimo. Asi kazhinji ndizvo dhairekodhi kunyorwa uye kuiswa.
Ngatione kuti sei. Chekutanga pane zvese, patinoshanda kubva kunyaradzo, ndekuzviisa isu mudhairekitori iyo pasuru yatinoda kushanda nayo iriko. Kune izvi tinoshandisa chishandiso "cd". Semuenzaniso, kana iwe wakadhinda package uye unayo muDownloads folda, nyora mune terminal.
Uye kukurumidza inozochinja neiyo nzira kuratidza kuti uri mukati meiyi dhairekitori rehurongwa. Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti iwe unoda mikana yekuita zvimwe zviito senge ./configure, make, or make install… izvo zvatichaona zvinotevera.
Isa tar.gz kana tgz:
Aya marudzi etarball anoshandiswa zvakanyanya mu Slackware uye zvigadzirwa, kunyangwe yakawedzeredzwa kuti ipake kodhi yezvimwe zvekugovera. Kuisa tar.
Kana izvi zvisina kushanda Kuisa tar.gz, iwe unogona kuwana iyo isina kuburitswa dhairekitori kuti uone kana paine chinyorwa faira ine mirairo yekuiisa. Dzimwe nguva, pavanenge vasingateedzere maitiro akajairwa, vanogadzira vanosanganisira aya marudzi emafaira kutsanangura zvinoenderana, kutsamira, nezvimwe.
Tar.bz2 kana .tbz2:
Iyo inoshandiswa chaizvo package muBSD uye izvo zvakapararirawo kuLinux uye imwe * nix. Iyo yakarongedzwa netara uye yakatsindirwa uchishandisa BSD Zip 2. Maitiro ekuisa iyi mhando yechirongwa ndeiyi:
Izvi zvinofanirwa kukwana kuisa mapurogiramu paLinux. Ita shuwa iwe unoshandisa ropafadzo yemirairo yazvino.
Imwe Tepi Archive:
Dzimwe nguva tepi yekuchengetedza kana isina kumanikidzwa tara faira. Rudzi rwepakeji runochengetedza ruzivo rwakakosha kuti udzore zvizere mafaera arimo uye kurisunungura, iwe unongofanirwa kuita izvi:
Wobva watsvaga faira rine zita README.txt (kana zvakafanana) mukati mechinyorwa chisina kuburitswa uye tsvaga iyo yekumisikidza mirairo. Kazhinji ndezvekuita maitiro akafanana neakare apfuura ...
Tar.xz kana .xz kana .txz:
Munguva pfupi ndiri kuona zvakawanda zvemurume uyu. Kuti ushandise nerudzi urwu rwepakeji unofanirwa kuve nechishandiso xz-zvishandiso yakaiswa. Kuti ubudise uye uise iwo, shandisa:
Uye kana yangoburwa, faira rinotsvaga README.txt kana INSTALL.txt kuti uone iwo madhiri ekuisirwa, ayo anowanzo fanirwa ./configure, gadzira, uye gadzira. Kunyangwe dzimwe nguva cmake inogona kushandiswa.
.gz kana .gzip kana .bzip2:
Con GNU Zip mapakeji erudzi .gz kana .gzip anogona kumanikidzwa. Izvi zvinobatwa zvakafanana neBSD Zip 2 yakamanikidzwa mapakeji ne .zip zip. Kuti ubate nemhando iyi yepakeji, isu tinofanirwa kuve neunzip uye bunzip2 maturusi anowanikwa mune yedu system.
Zvimwe zvacho ndizvo zvakafanana nematanho anoonekwa nematara epamberi… Ita shuwa kuti unoona iyo README kana INSTALL mafaera aripo.
Kunyangwe ichitaridzika nezita rayo refu, .tar.lzma, kana kana ichitaridzika nezita rayo pfupi .tlz, mapakeji aya anoshandisa iyo Lempel-Ziv-Markov yekumanikidza algorithm uye kuitora nekuiisa, unofanirwa kunyora mukonisheni (kare iwe unofanirwa kuve neiyo lzma package yakaiswa):
Zvichienderana nemanyorerwo ari kuiswa pasuru yacho kwatiri Ipapo iwe unogona kutarisa mamwe mameseji faira mukati nemirairo kana kutevedzera nhanho dzatatsanangura kuisa mamwe ma tarball (./config, gadzira, gadzira). Imwe tsika yakanaka ndeyekutarisa iyo yekuvandudza webhusaiti, Iko kune dzidziso dzekuti ungaisa sei mapakeji kana paine Wiki saiti ine ruzivo rwakawanda.
* Ongorora: iwe unogona zvakare kuisa mamwe akarongedzwa mapakeji nechishandiso chinonzi installpkg.
Maitiro ekuisa mabhinari mapakeji:
Kuisa Java mapakeji zviri nyore. Izvo zvinodiwa zviri pachena, kuve neOracle Java muchina chaiwo wakaiswa (ingave iyo JRE kana JDK). Kuti tiise iyo tinofanirwa tinya nekodhi yekurudyi yegonzo pairi uye sarudza "Vhura neimwe application”Kubva pamenyu inodonha. Iwindo rinowoneka nerunyorwa rwekushandisa musystem yedu uye fomu fomu pazasi kunyora imwe. Zvakanaka, munzvimbo iyoyo unonyora "Java –jar "Pasina makotesheni, kusanganisira iyo nzvimbo mushure mechirongo chandakasiya. Ipapo iwe tinya pane bhatani "Vhura."”Uye inofanira kumhanya pasina dambudziko. Sezvauri kuona, hazvidiwe kuiisa.
Tinogona kuvauraya nekudzvanya kaviri pavari kuti vavhure, kana takambozvipa mvumo yekuuraya. Kuti uite izvi, tinya nekabhatani kabhatani kefaira uye woenda ku "Propiedades"Kugovera mvumo yekuuraya mune iyo tebhu«Pamusorois ». Iyo inogona zvakare kuiswa kubva kune iyo console nekuita zvinotevera:
For the .mhanya isu tichaenderera nenzira yakafanana kune iyo .bin. Iyi fomati inoshandiswa zvakanyanya kune vatyairi, senge iyo AMD Catalyst Center. Kuti uise iyo unogona kushandisa iyo koni:
Rangarira kupa mvumo yekuuraya zvisati zvaitika. Zvakare, vamwe vanofanirwa kumhanyiswa neropafadzo, mune izvo zviitiko zviite semidzi kana neSudo.
Kana iwe uchida kuisa iyo .run mu graphic mode, unogona kudzvanya kurudyi kwariri wosarudza "Propiedades", Zvino mune iyo tebhu"Mvumo"Mhando"Rega kumhanya iyo faira sechirongwa”Uye unobvuma kuvhara. Zvino kana iwe ukadzvanya kaviri pa .run uchaona kuti mugadziri akafanana chaizvo neaya ari muWindows anovhura (mhando Inotevera, Inotevera, OK…).
Maitiro ekuisa zvinyorwa:
MuLinux tinogona zvakare kuwana zvinyorwa zvine .sh kana .py zvinowedzera. Kuisa mhando iyi yezvinyorwa tichaenda kudhairekitori uko script inowanikwa nemirairo "cd" sezvataona kare. Ziso! Kana iyo script yakarongedzwa, tanga waburitsa kana kuisunungura. Ipapo, iwe unogona kuzvipa zvibvumirano zvekuuraya sezvaunenge uchitoziva (unogona kuzviita mune graphical mode kana kubva kune iyo terminal nemirairo "chmod + x script_name"pasina makotesheni). Kana vachinge vawana mvumo yekuuraya, kubva kune iyo terminal
Kune mafaera ane kuwedzera .py Python muturikiri wemitauro yemitauro anofanira kudaidzwa. Kuti uite izvi, nyora mukoni yacho izvi:
Kune mamwe marudzi emafaira uye mapakeji ekumisikidza zvirongwa muLinux. Mamwe mapakeji kubva kuBSD, Solaris, Mac OS X, uye mamwe * nix anogona kuiswa paLinux. Muenzaniso weiyi ndiwo Solaris .pkg. Kuisa iyo .pkg unogona kudzvanya padziri nekiyi bhatani remakonzo, enda ku "Propiedades"Uye"Mvumo”Uye govera ita zvibvumirano kwairi. Wobva wadzvanya pairi kuti uzviise.
Kune zvakare zvishandiso zvakaita Alien kushandura kubva pane imwe fomati kuenda pane imwe, semuenzaniso kubva ku rpm kuenda ku deb, nezvimwe. Izvi hazvikurudzirwi zvakanyanya uye dzimwe nguva zvinogona kukonzera matambudziko. Saka ini handikurudzire.
Kuenderera mberi neLinux package gibberish, kutaura kuti kune zvakawanda kupfuura izvo zvinoonekwa pano, asi zvakawandisa uye zvisingawanzo. Muenzaniso wekushaikwa ndeye .slp ivo vanoshandisa kubva kuStampede Linux chirongwa. Kushandura .slp kuita mamwe mafomati akajairika iwe unogona kushandisa Alien (akamboiswa Alien) seizvi:
Somuenzaniso, Kuchinja kubva .slp kusvika rpm:
Unogona kusiya zvirevo zvako nezvikumbiro, kusahadzika kana kutaura. Kana iwe uine chero matambudziko anotevera matanho mune ino dzidziso, ndichave ndinofara kukubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Isa zvirongwa paLinux
Kune rangu chikamu ini ndinozvichengeta ... zvizhinji zvezvinhu zvaanotaura ini handina kana kuzvinzwisisa.Ndatenda!
Pindura kuna Nathan_X
Yakakura uye yakanaka chinyorwa. Wakajekesa kusahadzika kwakawanda, waita hako !!!
Pindura kuna jm37
yakanaka chinyorwa chako asi ndinoshamisika kuti nei pasina chiyero chevanoisa ekuparadzaniswa kwakasiyana, kana kana kuriko, nei kusiri kushandiswa?
Zvakanaka chinyorwa chako asi, chinovhiringidza zvakanyanya kune linux inotangisa matanho mazhinji kuisa chimwe chinhu chiri nyore, chinofanira kunge chiri chinhu chakadai kudzvanya kaviri uye voila, ini handinzwisise kuti sei iwe uchiita kuti zvinhu zviome, nenzira iyoyo ndinofarira kugara nema windows, kubvira tariro yangu Mushure mekutamira kune yemahara software, ndakanetseka ndichiedza kuisa pasuru
Iwe haufanire kuora moyo! Ndinoziva kuti pakutanga kwakaoma sei, asi zuva nezuva maitiro ekuisa mashandiro anovandudza. Zuva rega rega zvinowanzoitika kuona iyo .DEB uye .RPM mumapeji epamutemo ezvirongwa. SNAP mapakeji parizvino ari kuendeswa mukuwedzera kune ekuparadzira software mamaneja. Pandakatanga imomo muna 2006 zvainge zvakaoma chaizvo.
usanete moyo tenda ini windows anoyamwa, ipapo uchaona mukana wekushandisa gnu / linux (minus ubuntu: v)
Ingo kusanetseka nezve hutachiona muLinux kunoita kuti ive yakakodzera kuyedza
KA FW akadaro
Pindura kuna KA FW
Jos + e J Gascón akadaro
Tsananguro yakanakisa, handina kuwana nzira yekutsanangurira vamwe, vana, shamwari, vandinoshanda navo vese vanowana gnu-linux esoteric, chete kune vatangi, rudzi rwepahotera kana tembere, ndinokutendai zvikuru nekujeka kwetsananguro .
Pindura kuna Jos + e J Gascón
Juan Cusa akadaro
Zvakanaka ndakaifarira zvakanyanya asi ndichine dambudziko. Pandinoda kuisa libpng16.so.16, zvinova ndizvo zvinondibvunzwa nechirongwa.
Nemamwe mukana wekukwira http://sourceforge.net/projects/libpng/?source=typ_redirect
* Ini ndinotora iyo tar.xz
* ipapo chinouraya
zuva @ jua00: ~ $ tar Jxvf '/home/jua/Desktop/libpng-1.6.21.tar.xz'
* wobva wasvetuka kiromita runyorwa rwemafaira
libpng-1.6.21 / pngwio.c
libpng-1.6.21 / libpng.3
Uye magumo ini handizive zvimwe zvekuita muchikamu chino ini ndinosungirira.
Kana mumwe munhu akandipa ruoko ndinovatenda zvikuru
Pindura kuna juan cusa
Iyo tar.xz Faira ipakiti yakamanikidzwa, ndokuti, seti yemaforodha uye mafaera akaiswa mu "mudziyo" unonzi tar, uye ndokumanikidzwa ne xz. Nemurairo wawakamhanya, chinhu chega chawakaita kusunungura uye kuburitsa zvirimo mukati meiyo tar.xz (kana zvikaita kuti zvive nyore kwauri, unoita zvimwe chete nekukanya kwechipiri uye kuvhura, zviri zvimwe kana zvishoma saizvozvo mu migove mizhinji nenzvimbo dzakajeka). Iyo "kilometre list" inoenderana nemafaira aive mune iyo tar.xz iyo yakanga isina kuburitswa, uye sezvo iyo faira rawakatora riri pa desktop yako, dhairekitori ine izvo zvisina kuburitswa zvemukati zvinofanirwa kunge zvakagadzirwa ipapo ipapo. Iye zvino iwe unongofanirwa kuisa, uchifunga kuti kutsamira kwepurogiramu kwatove kuiswa, izvi ndizvo zvinotevera:
Vhura terminal uye unomhanya izvi:
cd '~ / Desktop / libpng-1.6.21'
Ini ndoda kuva nechokwadi chekuti dhairekitori rakagadzirwa pakombuta yako inonzi "libpng-1.6.21", kana zvisiri, tarisa zita uye uchinje mumirairo yapfuura. Wobva wateedzera iwo maarairidziro mune iyo README.txt kana INSTALL.txt faira iri mune imwecheteyo folda, kana isipo kana isina mirayiridzo yekumisikidza, izvi ndizvo zvekuita mune terminal.
Chinyorwa chakanaka, chakachengetwa mumaBhukumaki angu uyezve ndakachiprinta muPDF fomati kuti ive neni pasiri paInternet.
Kushinga 2 akadaro
Pane kukanganisa, iyo .bat mafaera haasi windows mabhainari
Pindura Kushinga 2
Fabian Osorio Pena akadaro
Ini ndinokuda hahahaha Ndatenda Isaac PE, inguva yekutanga kuti ini ndiise chimwe chinhu chisiri mumidziyo yedistro yandinotora (debian), zvaive nyore chaizvo, chokwadika hapana chinoenzaniswa neyakareruka iyo iyo Windows inokupa iwe asi chaizvo izvo zvandinoda Linux: inyika yekudzidza uye ini ndiri mutsva kwazvo asi ndinofarirawo maPC, masystem anoshanda, zvese zvine chekuita nemakomputa uye nhare mbozha. Ndatenda
Pindura kuna Fabian Osorio Peña
Iwe unowana zvichikuomera here kuenda kune iyo system menyu uye kuvhura iyo graphical package maneja (Synaptic, software maneja, Yast kana chero chaunobata) uye nekudzvanya kaviri mbeva isa chirongwa (application, mutambo, internet server, .. .) urikudei?
Zvese kubva kunzvimbo yemahara, isina mavhairasi, uye zvese zvakanyatsogadziriswa uye zvakagadzirira kumhanya kubva kuhurongwa menyu, iyo nenzira inorayirwa nerudzi rwechirongwa (Internet, Hofisi, Mitambo, ...).
Paunenge uri muWindows unofanirwa kutsvaga iyo yekumisikidza chirongwa ini handizive kuti, vazhinji vanoenda kune chero webhusaiti (kunyangwe rukova nekambani) uye kurodha mavhairasi anehutachiona, ...
Ini ndinofunga kuti mumazuva gumi kana gumi nemashanu, uine mumwe munhu wepedyo wekubvunza mibvunzo, hapana ruvara pakati peumwe neumwe.
Chimwe chinhu ndechekuti iwe unoda imwe chirongwa, isina yeLinux vhezheni kana iyo isingauyi mune software repository, asi mune izvo, hongu, inogona kunge iri dambudziko, inyaya yekuziva iyo chaiyo dzimwe nzira uye kudzidza maitiro vashandise: MS Office -> LibreOffice, Photoshop -> Gimp, ... 90% yevashandisi vePC havazove nedambudziko neLinux, izvo zvikuru zvisingazivikanwe (havana mari yekutenga kushambadza pawebhusaiti yevanotengesa malaptop kana vezvematongerwo enyika kwete kudzingirira zvisiri pamutemo zveMicrosoft: kuiswa kweWindows padhuze nemakomputa hakubvumirwe muSpain, France, Italy, ... nekuraira 2005/29 / CE, iyo semuenzaniso kuSpain iri muMutemo 29/2009 waDecember 30: inoshusha uye ine hukasha zviito) nekutenda kwatove muItaly nedare repamusoro soro: Corte di Cazassione mutongo n. 19161 wa 11/09/2014
Chinyorwa chinonakidza. Kune vamwe vaisaziva, kuti zvinobuda sei. Kwandiri yum uye apt-tora ndivo akanakisa mapakeji mamaneja, kazhinji ini ndinofungidzira pacman.
Uye mutorwa anobatsira kwazvo, inoshandurawo kubva ku rpm kuenda kudhibhi uye mamwe mafomati.
Shamwari huru, maita basa, imi hamuzivi kutambura kwandakaita ndichiedza kuisa mapakeji uye kutsamira kwezvimwe zvirongwa zvandinoshandisa, uye kuwedzerwa kusingazivikanwe hakumboshayiki, makaita kuti zvese zvinyatsojeka, ndinokutendai zvikuru.
Ini ndiri mu manjaro xfce uye zvese zviri mushe kusvika chikamu chandinonyora muoni ./configure chasvika uye chinondiudza "Iyo faira kana dhairekitori harimo", unogona kundibatsira?
Wakanakisa mupiro, wakazara kwazvo.
Ini ndinofunga kuti pakadaro unofanirwa kuverenga iyo yekuverenga kana kuraira iyo iyo faira kana wiki kana webhu refaira kubvira parinenge risiri munhu wese anoshandisa iyo ./configure vamwe vanoichinjira kune imwe faira nezvimwewo izvo zvinodaro pamusoro muchinyorwa chinoverenga: P
Peter Galeano akadaro
Ndimi pluto amoooooo! Ndiri muimbi, uye pakudzidzisa kwako handimbofi ndakadzokera kuWindows (ndanga ndatova neziso rangu paReactOS, kana ragadzikana ndichaizama) kana maMacOs. Nekuda kwekushushikana kwekutadza kuisa chero chinhu muKX studio, ndakapotsa ndarega ndokuenda. Linuxero zvachose!
Pindura Pedro Galeano
Zvese izvi ndezvekutanga chiChinese kwandiri, hapana kana chandakanzwisisa zvachose, iwe unofanirwa kuita chidzidzo chemadummy seni, nyowani kuUbuntu kana kuda kuzviedza, asi uchiona musoro uri kuisa zvirongwa, ndinofunga ndicha svetuka iyo Linux uye ini ndinopfuurira neWindows, Linux inofanirwa kuita kuti zvinhu zvive nyore uye zvakapusa, pamwe neWindows, inosimudza, tinya kaviri nekumisikidza pasina imwe ado, uye isina DOS kodhi, inova nhoroondo yekare yekunyora makodhi nemirairo, a backlog yeiyi kubva kuLinux. Asi hei, iyo dzidziso inonyatsonzwisiswa nevanhu vanoziva Linux uye zvakanaka kune izvo, asi kune mushandisi nyowani, zvakaoma kwazvo kuti unzwisise mirairo yakawanda uye mazwi ekumisikidza.
Izvi zvakafanana neakasarudzika algebra kwandiri uye ini ndaive ndakashata pamasvomhu, hahaha!, Saka chimbofungidzira kuti zvakaoma sei kunzwisisa izvi zvese, ini ndinoona izvi uye ivo vakaita seakachena akaomesesa masvomhu mafomula, ini ndinonzwa dzungu, hahaha !! Linux stacks uye unoisa kuitira kuti mwana ane makore gumi akwanise kuzviita, nei uchiomesa zvakanyanya, handiti?
Ini shit nekuseka
Nguva dzose, ini ndinoedza kushandisa linux
uye mushure memaawa maviri ekutenderera google ini ndinoitumira iyo M ...
Ini ndanga ndiripo kweawa kuti ndione maitiro ekuisa cadence, chirongwa chidiki chekuyedza kushandisa Jack ndisingafe nehasha mukuyedza, uye hezvino izvo sekutaura kwangu ndanga ndiri awa uye vese "nyanzvi" vane hazvina kundibvumidza kugadzirisa dambudziko rebenzi rekuisa tar-xz
Ndeapi mumawindows aunoita nekukenya kaviri
Uye kune vamwe vafambisi vechikepe kuti vadzidze, kuti M ... kubva ku linux zvinokuisira dambudziko, iwe unotsvaga mhinduro, iyo inotungamira kune rimwe dambudziko, uye unopedza masikati ese uchitenderera, ... kutambisa nguva
Linux yakanakira kunyora tsamba chete, usanyengere vanhu
Sabino ruiz akadaro
Yakanaka dzidziso, yakajeka uye inotsanangurwa, asi zvinokwanisika kuti nekuti ini ndiri mutsva kuLinux uye ndinodzidza zvakanyanya nemienzaniso, handina kunyatsonzwisisa maitiro ekuisa chirongwa, ndakaiverenga kanokwana kana, uye ndinongova neimwe chete mubvunzo, ndingaisa sei chirongwa muLinux. Ndiri kushandisa LinuxCNC 4, iyo yandiri kuda kushandisa iyo PYCAM Shanduro 2.7.14 - 0.6.1-2017-03 uye chokwadi ndechekuti ndave kuda kurega uye ndoshandisa vhezheni ye windows "pycam-11_standalone. exe "ndichishandisa WINE, ndakatozviedza uye zvinoshanda asi kwete iyo vhezheni yeLinux saka inoti pamusoro handizive kuiisa
unogona kundibatsira nemuenzaniso
Kana muchigona kundibatsira, ndinokutendai
Chekutanga pane zvese, Ndatenda.
Pindura Sabino Ruiz
EDUARDO NUÑEZ WHITE akadaro
Dzidziso yakanaka kwazvo. Makorokoto. Zvakareruka uye zviri nyore kunzwisisa. Nyika iri nani nevanhu vakaita sewe shamwari yangu inodikanwa. Zivo pamusoro pemari yayo uye kukosha kwayo.
Pindura kuna EDUARDO NUÑEZ BLANCO
Charles Romero akadaro
Yakanaka chinyorwa. Ini handisi nyanzvi muLinux saka zvinondibhadharira yakawanda dzimwe nguva, asi iyi dzidziso yakanaka. Ndinovimba izvozvi ndinogona kuisa pasuru yandinoda. Ndatenda zvikuru nekutora nguva kuti vamwe vadzidze.
Pindura Carlos Romero
Leonel quezada akadaro
Iwe wakakanganwawo kuti tine vazhinji vashandisi vatsva.
Ndakanga ndisingazive kuti ndeipi yeiyi mirairo yekutevera.
Pindura kuna Leonel Quezada
Ini ndinoda yemahara software, asi yakaoma zvekuti vazhinji vazhinji vevashandisi vanotiza nekutya.
Hukuru magiraidhi asi kurodha chirongwa iwe unoshanduka mutema uye ini handikuudze mutyairi
Ini ndine muenzaniso neArduino uye ayo USB mvumo hapana nzira yekunzwisisa mirairo mune inofara koni.
Iyo koni ichave inoshanda zvakanyanya kune avo vane nguva yekudzidza.
Ndatenda uye ndine urombo nezvakataurwa asi ndiri kuzvishandisa sekathisis.
Ndatenda nekutsanangura! Shuwiro yakanaka.
ndosaka munhu achibvisa linux….
Carlos Rodriguez G. akadaro
Ini ndanga ndichitsvaga akati wandei masaiti, uye apa ini ndaigona kuwana iwo matipi anondiudza kuti dzimwe nguva vanogadzira vanounza ruzivo mune runyorwa faira, maitiro ekuisa maapplication.
Ini ndinotenda chaizvo iyo dzidziso, kune mumwe munhu achangobva kuisa imwe yeanux distributions, zvinonetsa kufambira mberi mune kuiswa.
Pindura Carlos Rodríguez G.
Ndinofanira kunge ndakapusa, uye ndanga ndichishandisa Linux kwemakore gumi
(kwandiri zvinonzwisa tsitsi)
MuLinux munhu wese anofunga: Nei tichizozviita nyore kana tichigona kuzviita zvakaoma?
Chimwe chinhu chaunoneta nekuverenga mune izvo zvidzidzo zvinotevera
Asi hapana munhu anokuudza mashandisiro emirairo iyi, unoinyora kupi? mune chinouraya? mune dura rezvinyorwa? rini?, zvese pamwechete? mumwe nemumwe? iwe unofanirwa kumirira kuti basa riitwe mushure mekutaipa yega yega? zvinorevei kuumbiridza? Sei?
Zvese zvine chinangwa-chakanaka, (uye zvisina maturo) linux gurus, avo vanoziva, (uye vazhinji vasina zano, asi nyora kana kuteedzera varairidzi kuti vave neminiti yavo yekubwinya) kutora zvishoma zvinhu izvo iwe zvausingazive pfungwa, ( for Izvo zvinovhura tute, handiti?), Izvo zvinoita sezvisina kushata, kana ndikayambira iweaaannnnn!
Asi pane linux zvisina maturo zvakanaka, zvinhu zvakaita seizvi
Yakazara, kana iwe uchida kuisa chirongwa chisiri munzvimbo dzekuchengetera, (unocheka) uye iwe uchichiwana mu tar.xz, ipapo iwe unopedza maawa, (ndanga ndiri vatatu) kuyedza kuwana rimwe benzi kuti ritsanangure maitiro isai iyo, ine MAITIRO ANOSHANDA!
Ini handisati ndazviwana
Ndinofanira kunge ndakapusa, asi mumawindo zvinotora mabhatani maviri
Ini ndinokunzwisisa iwe Emerson, zvakare nematambudziko kuisa Cadence tar.xz. Inotaridzika kunge dhairekitori ine mapurogiramu anotakurika, pinda kaviri wobva waenda, asi ini ndoda kuiisa uye hunyanzvi hwevaya vanoita chirongwa ichi havasi kukusiira iyo yekumisikidza faira ine chikwereti, nekuti chavari kuda ndechekuti iwe uise yavo repository iyo inopinda chese chinhu sisitimu nemaapplication ayo, ayo achiri echinyakare. Izvo zvinoshamisa, ini ndinoda Linux, ini ndinotoshandisa Mint paPentium 4 uye inoyevedza, ine Kodi. Asi hazvishamise kuti makore anoenda uye havakwanise kugadzirisa nyaya yekugadzirisa odhiyo. Vazhinji vedu tinoda kuendesa kuLinux, kune software yakanaka asi isu vedu vanoda VST pro mastering vanofanirwa kunge vaine waini hongu kana hongu, kana kuita Carla, LinVST ishande pasina dambudziko rakawanda.
Mauro theler akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ndanga ndiri amateur kwenguva yakareba asi novice kana zvasvika pakuisa aya mapakeji nezvirongwa. Ndine ZorinOS 15 lite Xfce uye ndinoda kuisa Gephi inouya mu tar.gz
Ndakaivhura zip ndokuisa na manager. Iye anozviratidza kwandiri asi haaite. Ndakaedzawo ne
tar-zxvf package_name.tar.gz (kana package_name.tgz, kana iri .tgz)
./configure asi hazvinditore kumisikidza uye ipapo mapepa angu akapiswa
Pindura Mauro Theler
Cesar Martinez akadaro
Ndine urombo, ndingaite sei kuisa teamviewer pane debian, ndakaedza zvakadaro asi ndakakwanisa, ndinovimba munogona kundibatsira.
Pindura kuna cesar martinez
Maria del Mar Senra Martul akadaro
Chinyorwa chikuru. Iyo huru peji dhizaini zvakare. Ndatenda!
Pindura María del Mar Senra Martul
nguva dzose zvakafanana
iyo «nyanzvi inotsanangura maitirwo azvo, inokuudza kuti hongu, unofanirwa kunge uine XZ-Utils yakaiswa, asi haakuudze izwi nezvekuti ungaiisa sei-kuiisa
Shanduro dzinotevera dzeLinux Mint dzichava nyore uye dzichishanda